Home News Ganacsade Garoowe ku geeriyooday kadib Dagaalkii Xalay ka dhacay Magaaladaa
Ganacsade Garoowe ku geeriyooday kadib Dagaalkii Xalay ka dhacay Magaaladaa
Wararka ka imaanaya Magaalada Garoowe ayaa sheegaya in ganacsade si weyn magaaladaasi looga garanayay uu ku geeriyooday iska horimaadkii xalay ka dhacay Xarunta Gobolka Nugaal.
Iska horimaadkan oo ka dhacay afaafka hore ee Xarunta Baarlamaanka Puntland ayaa u dhaxeeyay ciidan ilaalo ahaan u joogay xaruntaasi iyo ciidan kale, oo ka yimid dhanka Madaxtooyada Puntland.
Ganacsade Cabdikariin Maxamed Faarax (Dhagaweyne) oo xarun ganacsi ku lahaa agagaarka Xarunta Baarlamaanka Puntland ayaa ku geeriyooday rasaastii ay labada dhinac is weydaarsanayeen.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Dhagaweyne uu sidoo kale ahaa Agaaasime Kuxigeenka Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Somaliya, qaybteeda ka hawlgasha Puntland, inkastoo aanay taasi masuuliyiintu xaqiijin.
Sidoo kale laba mid ah Ciidamada Booliska Puntland ayaa waxaa la soo sheegaya in ay ku dhinteen iska horimaadka xoogan ee xalay gilgilay Magaalada Garoowe.
Magaalada Garoowe ayaa waxaa ka taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Cabdixakiin Maxamed Axmed.
Xildhibaano la sheegay in ay taabacsan yihiin Madaxweyne Deni ayaa Magaalada Garoowe ka wada olole ay ku doonayan in ay mooshin xil ka qaadis ah kaga soo gudbiyan Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxda Puntland iyo Saraakiisha Ciidamada ayaan weli ka hadlin dhiilada laga dareemay Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland.